Iicrochemicals, iarhente esasazekileyo, iCrotonic Acid-Freemen
Iminyaka eli-19 ijolise ekupeyinteni ipeyinti kunye nokuhonjiswa kweenkuni.
I-Shanghai Freemen Chemicals Co, .Ltd ijolise ekubeni ngomnye wabathengisi beekhemikhali abaphambili ngokudala ixabiso elongeziweyo. Sizimisele ukubonelela ngeemveliso zeekhemikhali zexesha elide ezinokulondolozeka kunye nezikhuphisanayo kubathengi beemarike zokuphela zehlabathi kunye nezommandla ngokudibanisa izixhobo.
Icandelo lethu leNkonzo
Sinikezela ngeepotifoliyo ezahlukileyo zokunceda abasasazi bengingqi ngamava ethu angaphezulu kweminyaka engama-25 kushishino lwezolimo. Indawo yethu yokubonelela isuka kubalimi abaphambili ukuya kwii-ingridients ezisebenzayo (i-insecticide, i-Fungicides kunye ne-Herbicides) kunye neefomula. Siyayikhathalela malunga ne-quliaty yeemveliso zethu, ingaphelelanga kubathengisi kunye nokunyibilikisa, sinokubonelela ngobungakanani bokupakisha ukuze sihlangabezane neemfuno zabathengi.
Sinikezela ngokukhetha abaphakathi abaphambili kunye ne-API ngolwazi lwethu lobuchwephesha kunye nokusebenza kwe-GMP. Silandela ngokungqongqo iimfuno kwizinyibilikisi kunye nolawulo lokungcola, ukuqinisekisa ukusetyenziswa kokhuseleko lweemveliso zethu.
Iimveliso zethu ezikhethiweyo zentsebenzo ephezulu zisetyenziselwa uluhlu olubanzi lwezicelo: ukusukela kumashishini ezithuthi kunye namavili kumzi mveliso wombane, wolwakhiwo kunye nowoyile kunye negesi.Siza kukhonza abathengi bethu ngeemveliso zethu kunye nobuchwephesha bokwazi kunye nepakethe yedatha.
Sikulungele ukuphuhlisa kunye nokuhlawula irhafu ukwenza ezinye izinto eziphambili ukusuka kwi-lab ye-lab-scale ukuya kwimveliso yorhwebo ngokungaguquguqukiyo nakwixesha elide. Iimveliso zethu eziphuma ngaphandle zinezinto ezizodwa zokwenziwa ngokunyanzeliswa kwenkqubo elungelelanisiweyo okanye izinto ezizodwa eziluhlaza. Siyaqhubeka nokuphucula iindleko kunye nomgangatho we-HSE mihla le.
CAS 3003-25-2, 2-Methyl resorcinol, I-CAS 608-25-3, (R) -3-Aminobutanol, Ii-Amines, i-C10-C14-tert-alkyl, I-CAS 453-18-9,